ဘူဖှနျရေးတဲ့ ဘူဖှနျ့ထံ ပေးစာ……..(အပိုငျး 2) - SPORTS MYANMAR
ဘူဖှနျရေးတဲ့ ဘူဖှနျ့ထံ ပေးစာ……..(အပိုငျး 2)
1990 ကမ်ဘာ့ဖလား က အီတလီ မှာ ကငျြးပခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ပှဲဟာ အာဂငျြတီးနား နဲ့ ကငျမရှနျးတို့ ပှဲစဉျ ဖွဈပွီး ဆနျစီရို မှာ ကစားခဲ့ပါတယျ။
ကနြျောဟာ အိမျက အခနျးငယျလေးထဲမှာ အဲဒီပှဲကို ကို တဈယောကျထဲ ကွညျ့နခေဲ့တာ ဖွဈပွီး ၊ ပုံမှနျ ဘောလုံးပှဲကွညျ့နကွေလို သူငယျခငျြးတှလေဲ မပါခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအခြိနျမှာ အဘှားကလဲ မီးဖိုခနျးထဲမှာ ဘာတှေ သဘောကနြရေငျး ရယျနမှေနျး မသိပါဘူး။ အပွငျမှာ နကေလဲ ပူနတေော့ ၊ ပွတငျးပေါကျတှေ အားလုံး ပိတျထားတာမို့ ၊ အခနျ့မှာ တီဗှီက မီးရောငျကလှဲရငျ ခပျမှိုငျးမှိုငျး ဖွဈနတော မှတျမိနဆေဲပါ……
အဲဒီတုနျးက ကငျမရှနျး ဆိုတာ ဘယျနရောမှာ ရှိတဲ့ နိုငျငံလဲ ဆိုတာတောငျ မသိခဲ့သလို ၊ ကမ်ဘာပျေါမှာဒီလို နိုငျငံ ရှိသေးတာပါလား ဆိုပွီးတောငျ ရရှေတျမိခဲ့ပါသေးတယျ။ ကနြျောတို့ အမြားစု သိထားကွတာက အာဂငျြတီးနား နဲ့ မာရာဒိုနာပဲလေ။ ဒါပမေယျ့ ကငျမရှနျးမှာလဲ ကစားသမားကောငျးတှေ ပါလာတယျဗြာ။ နှရောသီ နပေူ ခေါငျခေါငျကွီးမှာတောငျ သူတို့ရဲ့ ဂိုးသမားကတော့ လကျစီးဂြာစီကို အပွညျ့အစုံ ဝတျဆငျထားလို့ဗြ။
သူ့ရဲ့ ရှလြေ့ားပုံတှေ ၊ မားမားမတျမတျ နဲ့ ကာကှယျ ပွပုံတှကေ အရမျးကို အားကဖြို့ ကောငျးပါတယျ။ အသငျးရဲ့ ခံစဈကို ညှနျကွားနလေိုကျတာမြား ၊ ရှငျးပွစရာ စကားလုံးတောငျ မရှာတှခေဲ့ပါဘူး။ ကနြေျာ့ မကျြစိထဲမှာတော့ တှဖေူ့းသမြှ လူတှအေားလုံးထဲမှာ အားအကမြိဆုံး ဘောလုံးသမား တဈဦပဲဗြာ…….
အစီစဉျ တငျဆကျသူက သူ့ရဲ့ နာမညျကို ကွငွောလိုကျတာက သောမတျ အနျကိုနို တဲ့…..
အဲဒီနောကျ သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကေ မှျောဆနျလှနျးသှားခဲ့ပါပွီ။
အာဂငျြတီးနားဟာ ထောငျ့ကနျဘော ရလို့ ကနျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ၊ သူက လူအုပျထဲကို ထိုးထှကျသှားပွီး ၊ ဘောလုံးကို ကိုကျ 30 အကှာအဝေးလောကျအထိ ပုတျထုတျလိုကျတဲ့ အခိုကျအတနျ့က ကနြေျာ့ ရဲ့ ဘဝကို ကိုငျလှုပျပဈလိုကျတာပါ။ ကနြျော ဟာ သာမနျ ဂိုးသမား တဈယောကျ မဖွဈခငျြတော့ပါဘူး။ သူ့လို ဂိုးသမားမြိုးကို ဖွဈခငျြတာပါ။
သူ့လို မာအပွညျ့ နဲ့ ၊ သတ်တိရှိရှိ နဲ့ ကစားပွတဲ့ ဂိုးသမားမြိုး ဖွဈခငျြတာပါ။ အဲဒီပှဲကွညျ့ပွီး မကွာခငျမှာပဲ ကနြျောဟာ ဘူဖှနျ အစဈကို ရှာဖှတှေရှေိ့သှားခဲ့ပါပွီ။
ကငျမရှနျးက ဂိုးသှငျးလိုကျတော့ ၊ သူတို့ အတှကျ အားပေးရငျးနဲ့ ပိုပွီးတော့ စိတျလှုပျရှားနမေိပါတယျ။ တံတှေးတှေ မွိုခလြိုကျ ၊ ဒုတိယ ပိုငျးမှာ တီဗှီဘေးမှာ ဟိုသှား ၊ ဒီသှားလုပျရငျးနဲ့ ဂနာကို မငွိမျတော့ပါဘူး။ အဲဒီအခြိနျ ကငျမရှနျးဟာ ဒုတိယမွောကျ လူထုတျခံလိုကျရပွနျတော့ ဆကျတောငျ မကွညျ့ခငျြတော့ဘူးလေ။
နောကျဆုံးတော့ ကငျမရှနျး ဘောလုံးသမားတှေ နဲ့ အတူ အောငျပှဲ ခံလိုကျပါတယျ။ လမျးထဲကို တဈခါတညျး ပွေးထှကျသှားပွီး အျောဟဈ အောငျပှဲခံနခြေိနျမှာတော့ အခွား အိမျနီးနားခငျြးက ကလေး နှဈယောကျကလဲ အတူတူ လာပွီး အောငျပှဲခံကွပါတယျ။ အားလုံး တဈညီတဈညှတျထဲ ကြူးရငျ့နခေဲ့တဲ့ စကားလုံးက “ ကငျမရှနျးဟာ ဘယျလို စှမျးဆောငျပွသှားတယျ ဆိုတာ မွငျလိုကျရတယျ မို့လား” တဲ့…
အဲဒီနမှေ့ာပဲ မငျးရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ မီးတောကျတဈခု စတငျ တောကျလာပါလိမျ့မယျ။ ကငျမရှနျး ဆိုတဲ့ နရောတဈခုဟာ တကယျရှိခဲ့သလို ၊ သောမတျ အနျကိုနို တညျရှိတဲ့ နရော တဈခုပဲလေ။ မငျးလဲ ဘူဖှနျ ဆိုတာ အီတလီမှာ ရှိတယျ ဆိုတာ ပွသနိုငျအောငျ ကွိုးစားရမှာပါ။
ဒါဆိုရငျ မငျး ဘောလုံးသမား ဖွဈလာတာဟာ ငှကွေေး ဂုဏျဒွပျတှေ ၊ ကြျောကွားမှုတှကွေောငျ့ မဟုတျဘူး ဆိုတာ ပွနျပွီး သတိရလောကျပါပွီ။ မငျးသာ မငျးရဲ့ ဝိညဏျကို ဂရုမစိုကျဘူး ၊ ဘောလုံး ပွငျပ က အကွောငျးအရာတှထေဲက Inspiration တှကေို မရယူဘူး ဆိုရငျ ၊ မကွာခငျမှာပဲ လမျးကွောငျး လှဲခြျောသှားပါလိမျ့မယျ။
ငါ့ အနနေဲ့ အကွံအညဏျလေး တဈခုပေးရမယျ ဆိုရငျ မငျး ငယျရှယျတဲ့ အခြိနျမြိုးမှာ ကမ်ဘာကွီးကို စူးစမျးမှု အပွညျ့နဲ့ မွငျကွညျ့လိုကျစမျးပါ။ ဒါက မငျးဘဝကို မငျး ကယျတငျရာ ဖွဈသှားနိုငျသလို ၊ မငျးရဲ့ မိသားစုအတှကျ ၊ ခေါငျးခဲစရာ အကွောငျးအရာတှေ အတှကျ ဖွရှေငျးခကျြတှတေောငျ ရရှိသှားနိုငျပါတယျ။
ဂိုးသမား တဈယောကျ ဖွဈလာဖို့ ဆိုတာ ရဲရငျ့ဖို့ လိုအပျတာ မှနျပမေယျ့ ၊ အဲဒီ ရဲရငျ့မှု ဆိုတာ မာနကွီးတာမြိုး မဟုတျဘူး ဘူဖှနျလေးရေ……..
စိတျဓါတျတှေ အရမျးကလြှနျးတဲ့ အခြိနျမှာ ၊ ထူးထူးဆနျးဆနျးတှလေဲ ဖွဈလာနိုငျသလို ၊ အလှတရားတှလေဲ ပျေါလာနိုငျသေးတယျကှ။ တဈမနကျမှာတော့ မငျးဟာ ပုံမှနျ လုပျရိုးလုပျစဉျကနေ ခှဲထှကျပွီး ၊ မတူညီတဲ့ လမျးကွောငျးတဈခုကို စတငျကွညျ့ဖို့ ရှေးခယျြလိုကျတယျလေ။
မနကျစာကို စားနကြေ နရောမှာ မစား သလို ၊ မွို့ကို လညျပတျကွညျ့တဲ့ အခြိနျကရြငျလဲ သှားနကွေ လမျးကွောငျးကနေ မဟုတျပဲ ၊ လမျးကွောငျးသဈ တဈခု စတငျလိုကျစမျးပါ။ တဈကှကှေ့ရေ့ောကျရငျ အပွငျမှာ ပိုစတာ အကွီးကွီး နဲ့ ရေးသားထားတဲ့ CHAGALL ဆိုတဲ့ ပွတိုကျကွီးကို မငျးတှပေ့ါလိမျ့မယျ။
ဒီနာမညျကို အရငျက ကွားဖူးပမေယျ့ ၊ အဲဒီ ပွတိုကျထဲက အနုပညာတှေ အကွောငျးတော့ မငျး ဘာမှ သိမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီစာရဲ့ အရေးအကွီးဆုံး အပိုငျးက အခုမှ လာတော့မှာပါ။ မငျးအနနေဲ့ အဲဒီ ပွတိုကျကွီးထဲကို တဈနနေ့မှေ့ာ မဖွဈမနကေို ဝငျသှားရမှာ ဖွဈသလို ၊ ဘ၀ ရဲ့ အရေးအကွီးဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြတှလေဲ ခမြှတျနိုငျခှငျ့ ရရှိခဲမှာပါ။
တကယျလို့သာ ပွတိုကျထဲ မသှားဘူး ဆိုရငျတော့ မငျးဟာ ဘေားလုံးသမား တဈယောကျ ၊ Superman လို့ ချေါတဲ့ အသံတှကွေားထဲမှာ သာယာရငျး ၊ နောကျထပျ တိုးတကျသှားမယျ့ လမျးကွောငျးတှကေို ပိတျမိသှားတော့မှာ သခြောပါတယျ။
ဝငျသှားပွီ ဆိုရငျတော့ အထဲမှာ CHAGALL ဆှဲထားတဲ့ ရာပေါငျးခြီတဲ့ ပနျးခြီကားတှေ မွငျရမှာ ဖွဈသလို ၊ အမြားစုကတော့ မငျး နားမလညျနိုငျတာတှခေညျြးပဲ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခုတညျးသော ပနျးခြီကား တဈခပျြကတော့ မငျးရဲ့ ဦးနှောကျကို အလငျးရောငျတှေ ဖပျြခနဲ့ ဖွဈအောငျ စှမျးဆောငျပွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
အဲဒီ ပနျးခြီကား နာမညျက The Walk တဲ့…………….
အထဲက ပုံလေးက အထူးအဆနျးကွီး မဟုတျပါဘူး ၊ အမြိုးသား နဲ့ အမြိုးသမီး ပနျးခွံထဲမှာ ပြျောပှဲစားထှကျနကွေတယျ ၊ အမြိုးသမီးကို လထေဲမှာ မွှကျေထားပွီး ၊ အမြိုးသားက စှဲစှဲမွဲမွဲကိုငျထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ အမြိုးသားက သူမရဲ့ လကျကို မွဲမွံအောငျ ဆုပျကိုငျထားပွီး ၊ အမြိုးသမီးကတော့ နတျသမီးလေးလို ပြံဝဲပွနတောလေ။ ကွညျ့လိုကျရငျး အဲဒီ ပနျးခြီကားဟာ ကိုယျ့ ကို အခွား ကမ်ဘာတဈခုထံ ချေါဆောငျသှားသလိုပါပဲ။
ကိုယျ့ကိုကိုယျ ဖွူစငျတဲ့ ကလေးငယျ တဈယောကျလို ခံစားလာမိသလို ၊ ပြျောရှငျမှုတှကေလဲ ခကျြခွငျး မှေးဖှားလာခဲ့တာလေ။
• နောကျထပျ တငျစားရရငျ သျောမတျ အနျကိုနို ဟာ ကစားသမားတှေ ရှုပျယှကျ ခတျနတေဲ့ အုပျထဲကို ထှကျပွီး ၊ ဘောလုံးကို ကိုကျ 30 လောကျအထိ ပုတျထုတျပွသလိုမြိုး
• မီးဖိုခြောငျတဲ့ အဖှားက ဘူဖှနျလေးကို လှမျးချေါလိုကျတဲ့ အသံမြိုး
• ခပျမှိုငျးမှိုငျး အခနျးလေးထဲမှာ ကငျမရှနျးပှဲစဉျ ကွညျ့နရေငျး ၊ အနိုငျရပါစေ ဆိုပွီး ကွိတျ ဆုတောငျးနသေလိုမြိုးပေါ့……..
အခုတော့ အသကျတှေ ကွီးလာလို့ ၊ ဒီလို ခံစားခကျြတှကေ လှယျလှယျ နဲ့ မသှေ့ားနိုငျတယျလေ။ ဒါကွောငျ့မို့ နောကျတဈနေ့ ရောကျသှားပွီ ဆိုတာ နဲ့ ဒီပွတိုကျထဲကို ပွနျလာပွီး ၊ အဲဒီ ပနျးခြီကားလေးကို ပွနျကွညျ့။ အရငျက ခံစားဖူးတဲ့ ခံစားခကျြတှေးကို ပွနျလညျ ပုံဖျောလိုကျစမျးပါ။ ဒါတှကေ မငျးလြှောကျလှမျးမယျ့ အနာဂတျ လမျးတှေ အရမျးကို အရေးပါနပေါတယျ။
စိတျဓါတျကနြတေဲ့ မငျးအတှကျ အနုပညာ က အကောငျးဆုံးကုသဖို့ ဆေးဝါ တဈလကျ ဖွဈလာနိုငျသလို ၊ မငျးရဲ့ အမွငျတှကေိုလဲ အမြားကွီး လမျးဖှငျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ ပနျးခြီကားထဲက အမြိုးသမီး ရဲ့ ပြျောရှငျကွညျနူးမှုတှကေို မွငျရလလေေ ၊ မငျးရဲ့ စိတျ အတှငျးပိုငျးမှာ ရှိတဲ့ ပီတိတှကေ တဈဖွေးဖွေး နဲ့ အနျထှကျလာသလို ဖွဈမှာပါ။
ဒါဟာ မငျးဘ၀ ရဲ့ ရှငျးပွလို့ မရတဲ့ အခိုကျအတနျ့ ဖွဈသလို ၊ နောကျထပျ သာယာဖွောငျ့ဖွူးတဲ့ လမျးကွောငျး တဈခုထှကျပျေါလာဖို့အတှကျ ၊အတိတျက ခံယူခကျြတှေ နဲ့ ပွနျလညျ ဆကျသှယျပေးလိုကျသလို ပါပဲ။
ဘူဖွန်ရေးတဲ့ ဘူဖွန့်ထံ ပေးစာ……..(အပိုင်း 2)
1990 ကမ္ဘာ့ဖလား က အီတလီ မှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ ပထမဆုံး ပွဲဟာ အာဂျင်တီးနား နဲ့ ကင်မရွန်းတို့ ပွဲစဉ် ဖြစ်ပြီး ဆန်စီရို မှာ ကစားခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်ဟာ အိမ်က အခန်းငယ်လေးထဲမှာ အဲဒီပွဲကို ကို တစ်ယောက်ထဲ ကြည့်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ပုံမှန် ဘောလုံးပွဲကြည့်နေကြလို သူငယ်ချင်းတွေလဲ မပါခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာ အဘွားကလဲ မီးဖိုခန်းထဲမှာ ဘာတွေ သဘောကျနေရင်း ရယ်နေမှန်း မသိပါဘူး။ အပြင်မှာ နေကလဲ ပူနေတော့ ၊ ပြတင်းပေါက်တွေ အားလုံး ပိတ်ထားတာမို့ ၊ အခန့်မှာ တီဗွီက မီးရောင်ကလွဲရင် ခပ်မှိုင်းမှိုင်း ဖြစ်နေတာ မှတ်မိနေဆဲပါ……
အဲဒီတုန်းက ကင်မရွန်း ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံလဲ ဆိုတာတောင် မသိခဲ့သလို ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီလို နိုင်ငံ ရှိသေးတာပါလား ဆိုပြီးတောင် ရေရွတ်မိခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ အများစု သိထားကြတာက အာဂျင်တီးနား နဲ့ မာရာဒိုနာပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ကင်မရွန်းမှာလဲ ကစားသမားကောင်းတွေ ပါလာတယ်ဗျာ။ နွေရာသီ နေပူ ခေါင်ခေါင်ကြီးမှာတောင် သူတို့ရဲ့ ဂိုးသမားကတော့ လက်စီးဂျာစီကို အပြည့်အစုံ ဝတ်ဆင်ထားလို့ဗျ။
သူ့ရဲ့ ရွေ့လျားပုံတွေ ၊ မားမားမတ်မတ် နဲ့ ကာကွယ် ပြပုံတွေက အရမ်းကို အားကျဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အသင်းရဲ့ ခံစစ်ကို ညွှန်ကြားနေလိုက်တာများ ၊ ရှင်းပြစရာ စကားလုံးတောင် မရှာတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့် မျက်စိထဲမှာတော့ တွေ့ဖူးသမျှ လူတွေအားလုံးထဲမှာ အားအကျမိဆုံး ဘောလုံးသမား တစ်ဦပဲဗျာ…….
အစီစဉ် တင်ဆက်သူက သူ့ရဲ့ နာမည်ကို ကြေငြာလိုက်တာက သောမတ် အန်ကိုနို တဲ့…..
အဲဒီနောက် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက မှော်ဆန်လွန်းသွားခဲ့ပါပြီ။
အာဂျင်တီးနားဟာ ထောင့်ကန်ဘော ရလို့ ကန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ၊ သူက လူအုပ်ထဲကို ထိုးထွက်သွားပြီး ၊ ဘောလုံးကို ကိုက် 30 အကွာအဝေးလောက်အထိ ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်က ကျနော့် ရဲ့ ဘဝကို ကိုင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ ကျနော် ဟာ သာမန် ဂိုးသမား တစ်ယောက် မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး။ သူ့လို ဂိုးသမားမျိုးကို ဖြစ်ချင်တာပါ။
သူ့လို မာအပြည့် နဲ့ ၊ သတ္တိရှိရှိ နဲ့ ကစားပြတဲ့ ဂိုးသမားမျိုး ဖြစ်ချင်တာပါ။ အဲဒီပွဲကြည့်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ကျနော်ဟာ ဘူဖွန် အစစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။
ကင်မရွန်းက ဂိုးသွင်းလိုက်တော့ ၊ သူတို့ အတွက် အားပေးရင်းနဲ့ ပိုပြီးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။ တံတွေးတွေ မြိုချလိုက် ၊ ဒုတိယ ပိုင်းမှာ တီဗွီဘေးမှာ ဟိုသွား ၊ ဒီသွားလုပ်ရင်းနဲ့ ဂနာကို မငြိမ်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအချိန် ကင်မရွန်းဟာ ဒုတိယမြောက် လူထုတ်ခံလိုက်ရပြန်တော့ ဆက်တောင် မကြည့်ချင်တော့ဘူးလေ။
နောက်ဆုံးတော့ ကင်မရွန်း ဘောလုံးသမားတွေ နဲ့ အတူ အောင်ပွဲ ခံလိုက်ပါတယ်။ လမ်းထဲကို တစ်ခါတည်း ပြေးထွက်သွားပြီး အော်ဟစ် အောင်ပွဲခံနေချိန်မှာတော့ အခြား အိမ်နီးနားချင်းက ကလေး နှစ်ယောက်ကလဲ အတူတူ လာပြီး အောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ကျူးရင့်နေခဲ့တဲ့ စကားလုံးက “ ကင်မရွန်းဟာ ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ပြသွားတယ် ဆိုတာ မြင်လိုက်ရတယ် မို့လား” တဲ့…
အဲဒီနေ့မှာပဲ မင်းရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ မီးတောက်တစ်ခု စတင် တောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကင်မရွန်း ဆိုတဲ့ နေရာတစ်ခုဟာ တကယ်ရှိခဲ့သလို ၊ သောမတ် အန်ကိုနို တည်ရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခုပဲလေ။ မင်းလဲ ဘူဖွန် ဆိုတာ အီတလီမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ ပြသနိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာပါ။
ဒါဆိုရင် မင်း ဘောလုံးသမား ဖြစ်လာတာဟာ ငွေကြေး ဂုဏ်ဒြပ်တွေ ၊ ကျော်ကြားမှုတွေကြောင့် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပြန်ပြီး သတိရလောက်ပါပြီ။ မင်းသာ မင်းရဲ့ ဝိညဏ်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး ၊ ဘောလုံး ပြင်ပ က အကြောင်းအရာတွေထဲက Inspiration တွေကို မရယူဘူး ဆိုရင် ၊ မကြာခင်မှာပဲ လမ်းကြောင်း လွဲချော်သွားပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ အနေနဲ့ အကြံအညဏ်လေး တစ်ခုပေးရမယ် ဆိုရင် မင်း ငယ်ရွယ်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကမ္ဘာကြီးကို စူးစမ်းမှု အပြည့်နဲ့ မြင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ ဒါက မင်းဘဝကို မင်း ကယ်တင်ရာ ဖြစ်သွားနိုင်သလို ၊ မင်းရဲ့ မိသားစုအတွက် ၊ ခေါင်းခဲစရာ အကြောင်းအရာတွေ အတွက် ဖြေရှင်းချက်တွေတောင် ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
ဂိုးသမား တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဆိုတာ ရဲရင့်ဖို့ လိုအပ်တာ မှန်ပေမယ့် ၊ အဲဒီ ရဲရင့်မှု ဆိုတာ မာနကြီးတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ဘူဖွန်လေးရေ……..
စိတ်ဓါတ်တွေ အရမ်းကျလွန်းတဲ့ အချိန်မှာ ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေလဲ ဖြစ်လာနိုင်သလို ၊ အလှတရားတွေလဲ ပေါ်လာနိုင်သေးတယ်ကွ။ တစ်မနက်မှာတော့ မင်းဟာ ပုံမှန် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး ၊ မတူညီတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို စတင်ကြည့်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တယ်လေ။
မနက်စာကို စားနေကျ နေရာမှာ မစား သလို ၊ မြို့ကို လည်ပတ်ကြည့်တဲ့ အချိန်ကျရင်လဲ သွားနေကြ လမ်းကြောင်းကနေ မဟုတ်ပဲ ၊ လမ်းကြောင်းသစ် တစ်ခု စတင်လိုက်စမ်းပါ။ တစ်ကွေ့ကွေ့ရောက်ရင် အပြင်မှာ ပိုစတာ အကြီးကြီး နဲ့ ရေးသားထားတဲ့ CHAGALL ဆိုတဲ့ ပြတိုက်ကြီးကို မင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနာမည်ကို အရင်က ကြားဖူးပေမယ့် ၊ အဲဒီ ပြတိုက်ထဲက အနုပညာတွေ အကြောင်းတော့ မင်း ဘာမှ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အပိုင်းက အခုမှ လာတော့မှာပါ။ မင်းအနေနဲ့ အဲဒီ ပြတိုက်ကြီးထဲကို တစ်နေ့နေ့မှာ မဖြစ်မနေကို ဝင်သွားရမှာ ဖြစ်သလို ၊ ဘ၀ ရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလဲ ချမှတ်နိုင်ခွင့် ရရှိခဲမှာပါ။
တကယ်လို့သာ ပြတိုက်ထဲ မသွားဘူး ဆိုရင်တော့ မင်းဟာ ဘေားလုံးသမား တစ်ယောက် ၊ Superman လို့ ခေါ်တဲ့ အသံတွေကြားထဲမှာ သာယာရင်း ၊ နောက်ထပ် တိုးတက်သွားမယ့် လမ်းကြောင်းတွေကို ပိတ်မိသွားတော့မှာ သေချာပါတယ်။
ဝင်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ အထဲမှာ CHAGALL ဆွဲထားတဲ့ ရာပေါင်းချီတဲ့ ပန်းချီကားတွေ မြင်ရမှာ ဖြစ်သလို ၊ အများစုကတော့ မင်း နားမလည်နိုင်တာတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတည်းသော ပန်းချီကား တစ်ချပ်ကတော့ မင်းရဲ့ ဦးနှောက်ကို အလင်းရောင်တွေ ဖျပ်ခနဲ့ ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒီ ပန်းချီကား နာမည်က The Walk တဲ့…………….
အထဲက ပုံလေးက အထူးအဆန်းကြီး မဟုတ်ပါဘူး ၊ အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး ပန်းခြံထဲမှာ ပျော်ပွဲစားထွက်နေကြတယ် ၊ အမျိုးသမီးကို လေထဲမှာ မြှေက်ထားပြီး ၊ အမျိုးသားက စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ အမျိုးသားက သူမရဲ့ လက်ကို မြဲမြံအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ၊ အမျိုးသမီးကတော့ နတ်သမီးလေးလို ပျံဝဲပြနေတာလေ။ ကြည့်လိုက်ရင်း အဲဒီ ပန်းချီကားဟာ ကိုယ့် ကို အခြား ကမ္ဘာတစ်ခုထံ ခေါ်ဆောင်သွားသလိုပါပဲ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြူစင်တဲ့ ကလေးငယ် တစ်ယောက်လို ခံစားလာမိသလို ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကလဲ ချက်ခြင်း မွေးဖွားလာခဲ့တာလေ။
• နောက်ထပ် တင်စားရရင် သော်မတ် အန်ကိုနို ဟာ ကစားသမားတွေ ရှုပ်ယှက် ခတ်နေတဲ့ အုပ်ထဲကို ထွက်ပြီး ၊ ဘောလုံးကို ကိုက် 30 လောက်အထိ ပုတ်ထုတ်ပြသလိုမျိုး
• မီးဖိုချောင်တဲ့ အဖွားက ဘူဖွန်လေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ အသံမျိုး
• ခပ်မှိုင်းမှိုင်း အခန်းလေးထဲမှာ ကင်မရွန်းပွဲစဉ် ကြည့်နေရင်း ၊ အနိုင်ရပါစေ ဆိုပြီး ကြိတ် ဆုတောင်းနေသလိုမျိုးပေါ့……..
အခုတော့ အသက်တွေ ကြီးလာလို့ ၊ ဒီလို ခံစားချက်တွေက လွယ်လွယ် နဲ့ မေ့သွားနိုင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်တစ်နေ့ ရောက်သွားပြီ ဆိုတာ နဲ့ ဒီပြတိုက်ထဲကို ပြန်လာပြီး ၊ အဲဒီ ပန်းချီကားလေးကို ပြန်ကြည့်။ အရင်က ခံစားဖူးတဲ့ ခံစားချက်တွေးကို ပြန်လည် ပုံဖော်လိုက်စမ်းပါ။ ဒါတွေက မင်းလျှောက်လှမ်းမယ့် အနာဂတ် လမ်းတွေ အရမ်းကို အရေးပါနေပါတယ်။
စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့ မင်းအတွက် အနုပညာ က အကောင်းဆုံးကုသဖို့ ဆေးဝါ တစ်လက် ဖြစ်လာနိုင်သလို ၊ မင်းရဲ့ အမြင်တွေကိုလဲ အများကြီး လမ်းဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပန်းချီကားထဲက အမျိုးသမီး ရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတွေကို မြင်ရလေလေ ၊ မင်းရဲ့ စိတ် အတွင်းပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ပီတိတွေက တစ်ဖြေးဖြေး နဲ့ အန်ထွက်လာသလို ဖြစ်မှာပါ။
ဒါဟာ မင်းဘ၀ ရဲ့ ရှင်းပြလို့ မရတဲ့ အခိုက်အတန့် ဖြစ်သလို ၊ နောက်ထပ် သာယာဖြောင့်ဖြူးတဲ့ လမ်းကြောင်း တစ်ခုထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက် ၊အတိတ်က ခံယူချက်တွေ နဲ့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးလိုက်သလို ပါပဲ။